ကလိုစေးထူး: နွေဦး အေပရယ်လ်..
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:01 PM
ထိပြန်ပြီးး အဟုတ်မှတ်လို့ဖတ်နေတာ မေးမယ်ပေါ့ အဲ့မှာလည်း ငပိရည် တို့စရာတွေ ရလားဆိုပြီးး)
"I am picking ခရုဖင်လိမ်စ် up!" မှတ်ထားလိုက်ပြီး ။ ကိုတူးလင်းရေ့ မျှားခဲ့တဲ့ ငါးနဲ့ ထမင်းစားဖိတ်ပါလားဗျ ။
Apr 1, 2009, 10:26:00 PM
အဲ့ကွယ် ကိုတူလင်တို့ကတော့ လုပ်တော့မယ် .... သူများဆီမှာ ဖူးပြီးပြီ သူကအခု ထပ်ဖူးနေပြန်ပြီ ...
အဲ့ လေကွယ် သူတို့ဆီမှာ ဒီနေ့မှဖူးရတာကိုး ...
Apr 1, 2009, 10:31:00 PM
မနေ့က ပို့စ်တွေ လိုက်ဖတ်ရင် မရဲတရဲနဲ့ ဖူးလုပ်ထားလား မထားလားပေါ့
အာ ဒီနေ့တော့ပြီးပြီ ဆိုပြီး ရဲရဲကြီးဖတ်လိုက်ကာမှ :D
Apr 1, 2009, 11:48:00 PM
Apr 2, 2009, 12:32:00 AM
အဲ ထိပြန်ပြီ..... ဟုတ်လှချည်လားလို့တွေးပြီးဖတ်နေတာ ။ အဆုံးကျတော့မှ.....း(
Apr 2, 2009, 1:38:00 AM
သြော်.. ဧပြီ ၂ ရက်နေ့ရောက်တာတောင်
ခံနေရသေးသဟဲ့..... ငါ့နှယ်နော်... :(((
Apr 2, 2009, 1:39:00 AM
Apr 2, 2009, 1:40:00 AM
ခံရပြီဗျို့ ... စိတ်ကူးထဲမှာ ငဘတ်ကို မွှေကြည့်တုန်း ရှိသေးတယ် .. ဟင်းနော် .. ခြေသလုံးဖက်ကိုက်ချင်စိတ် ပေါ်လာပြီ။
ဒါနဲ့ ကျမ ဘာများဖွမိပါလိမ့် :|
Apr 2, 2009, 2:34:00 AM
ဓါတ်ပုံတွေ ဘာတွေနဲ့ဆိုတော့ အချီကြီးပါလားဗျို့... :D
အဲဒါကြောင့် စိတ်ထဲမှာတော့ ထင်သား... ဧပြီလပဲရှိသေးတယ်၊ အဲဒီမှာ မခံမရပ်နိုင်အောင် ပူနေတယ်ဆိုတော့... တခုခုလွဲနေသလိုပဲလို့...။
Apr 2, 2009, 4:22:00 AM
လုံးဝမထင်ဘူး.. ဒီမှာက ၂ ရက်နေ့ ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ မထင်ဘူး..း)
နောက်တယ်.. ဖတ်လို့ကောင်းနေတာ.. တကယ်ပဲ ချောင်းနဘေး ရောက်သွား သလိုလိုကို ခံစားရတယ်.. ထမင်းစားတာများ ဆက်ရေးတော့ မလားလို့..း)
ကိုစေးထူးရေ.. ဆီပုံးမရှိလို့ ဒီမှာပဲ ပြောခဲ့တော့မယ်..
ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ Tag ထားပါတယ်လို့..း)
Apr 2, 2009, 4:32:00 AM
တိဒယ်..တိဒယ်..။ ဒီရက်ပိုင်း ပို့စ်တွေဖတ်ရင် အောက်ဆုံး တို့ ကော်မန့်တို့က စဖတ်လို့..။ ကိုယ်လုပ်မယ်စဉ်းစား ထားပြီးမလုပ်ဖြစ်လိုက်လို့ ငှဲငှဲ..။ ဘာပဲပြောပြော အစ်ကို့ အိုင်ဒီယာလေးကမိုက်တယ်..။ ဗိုက်တောင် အတော်ဆာ သွားတယ်..။ ဟိ :P
(ကစေးထူး ဘလော့က မှတ်ချက်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ပါ)
ခုတော့ ဧပြီဖူးလ် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့
Apr 2, 2009, 11:20:00 AM
နောက်တခါကျရင် ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ အရင်စဉ်းစားပြီးမှ ဖတ်ရမလိုပါလား။
တို့လဲ ချောင်းရေစပ်စပ်လေးမှာ အတူလိုက် ရေထဲဆင်း ဟင်းရွက်ခူး ငါးဟင်းချက်စားမယ် ကြံစည်တုန်း.. Fool ဆိုတော့ နာသကွာ.. :))
အားပါးမြင်ခွာရွက်တွေ၊ ဒရင်ကောက်ညွန့်တွေ ငပိရည်တွေနဲ့..။ အဲဒါတွေမြင်တော့ ဗမာပြည်အကြောင်းများလားလို့ အပေါ်ပြန်ကြည့်တော့ နီစပ်စပ်လူကလဲပါလာသေးဆိုတော့...။ အော် အမေကြီးကားမှာလဲ တယ်ဟုတ်ပါလားမှတ်နေတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီမှာက ၃ရက်နေ့တောင်ရောက်နေတော့ သတိလဲချွတ်ယွင်းသွားတော့ ခံပဟ။
Apr 2, 2009, 2:12:00 PM
ပျော်စရာကောင်းလို့ ကျေကျေနပ်နပ် အရူးလုပ်သွားပါတယ်။
ကိုစေးထူးရေ.. မဖတ်ရသေးတဲ့ ပို့စ်တွေကနေ စဖတ်ရင်း အောက်ဆုံးက မှတ်ချက်လေး မြင်ပြီး april fool ဆိုတာ အရင် သိသွားပါတယ်ကွယ်.... ငှဲ..ငှဲ... :D
Apr 4, 2009, 2:39:00 AM
Ha ha... 1st April has been long passed, but it is worth being fooled. Thanks for the lively post.
May 8, 2009, 8:29:00 PM
Jun 15, 2009, 2:40:00 PM